PCHB – Page2– Myanmar Live
ခရီးသွား / ထိုင်း / ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း / လူနေမှုပုံစံ / မြန်မာ
February 18, 2019 February 18, 2019 - by PCHB
လာမယ့် ၁၉ ရက်နေ့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏အထွပ်အမြတ်ထားသော တပါင်းလပြည့်နေ့ဖြစ်တာကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ၄င်းနေ့ထူးနေ့မြတ်၌ ကုသိုလ်ပြုလုပ်နိုင်ရန်ဆို၍ မြန်မာနိုင်ငံနည်းတူ …
Uncategorized / ကမ္ဘာ့သတင်း / သတင်းများ / အားကစား
မနှစ်က FA ဗိုလ်လုပွဲရှူံးကြွေးကို ဆိုးလ်ရှားရဲ့ မန်ယူအသင်းပြန်ဆပ်နိုင်မလား FA ဖလား ပဉ္စမအဆင့်ပွဲစဉ်သုံးသပ်ချက်များ
February 15, 2019 February 15, 2019 - by PCHB
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲကိုခေတ္တရပ်နားထားပေမယ့် ကမ္ဘာ့သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံးပြိုင် ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဖလား( FA Cup) ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ ပဉ္စမအဆင့်ပွဲစဉ်တွေနဲ့ပရိတ်သတ် တွေကို …
ကမ္ဘာ့သတင်း / လူနေမှုပုံစံ
ဗာလင်တိုင်းမ် နှင့် “ချောကလပ်”
February 13, 2019 February 13, 2019 - by PCHB
နှစ်စဉ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့ဟာ ကမ္ဘာတ၀ှမ်း အားကျစရာချစ်ခြင်းများကို နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့်ဖေါ် ကျူး ကြသည့်နေ့ Valentine’s …
ချစ်သူများနေ့ ၁၄ ဖေဖော်ဝါရီ
တချိန်တုန်းကရောမမှာ စစ်ပွဲတွေကြောင့်စစ်သည်တွေ အများအပြား ကျရှုံးကြတဲ့အခါ ရောမဘုရင်က ရောမနိုင်ငံ သားတွေ ကို ယောင်္ကျားလေးတိုင်း မဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ့်အမိန့်ထုတ်တော့တယ် …
“နှင်းဆီပန်း” တို့ရဲ့အဓိပ္ပါယ် သူဘာလို့ကျွန်မကိုဒီအရောင်ပေးတာပါလိမ့်…?
ကမ္ဘာပေါ်မှာ “နှင်းဆီပန်း” တွေဟာရောင်စုံရှိပါတယ်၊ ဘာကြောင့် အချစ်ရဲ့ကိုယ်စားအနေနဲ့ နှင်းဆီ ပန်းအနီအရောင် ကိုအသုံးချကြတာလဲ ? ဟိုး…ကတည်းက …
ထိုင်းအစိုးရကဘယ်လိုနေ့မျိုးကို အလုပ်ပိတ်ရက်အဖြစ်သက်မှတ်ထားသလဲ ?
ထိုင်းနိုင်ငံဓလေ့ရိုးရာရုံးပိတ်ရက်မှအလုပ်ပိတ်တာလား ? ဒါမှဟုတ်ဘာသာရေးရုံးပိတ်ရက်တွေမှာမှအလုပ်ပိတ် မှာလား ? သို့မဟုတ်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်မှာမှအလုပ်နားရမှာလားဆိုတာ ကျနုပ်တို့လိုထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရွှေမြန်မာ တွေအတွက် တော့မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့အထဲကတစ်ခုလို့ထင်မိပါတယ် အဲဒါကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံဟာဘယ်လို …
ကမ္ဘာ့သတင်း / သတင်းများ / မြန်မာ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အထုပ္ပတိ အကျဉ်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားသူရဲကောင်း၊ မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်၊ တပ်မတော်၏ ဖခင်ကြီး၊ဗိုလ်ချုပ်နှင့် နိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်သည်။ သူ၏ဖခင်မှာ …
ကမ္ဘာ့သတင်း / ထိုင်း / သတင်းများ / မြန်မာ
ထိုင်းတွင်ကျင်းပသည့် နိုင်ငံတကာ သာသနာနှင့် လူမှုထူးချွန်ဆုပေးပွဲတွင် မြန်မာ ၈ ဦး ဆုရရှိ
ထိုင်းနိုင်ငံရှိအဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၄ ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီး နိုင်ငံတကာက ဘာသာရေးနဲ့ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အားကျိုးမန်တက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေကို MORAI AWARDS-2019 ဆိုတဲ့ဆုချီးမြှင့်ခဲ့ရာမှ …
ဒဏ္ဍာရီထဲက ဒေါင်ဒင်အင်းသမိုင်း ဒေါင်ဒင်အင်း ငါးဖမ်းပွဲပုံရိပ်များ
February 11, 2019 February 11, 2019 - by PCHB
ကျိုက်မရောမြို့နယ်မှ ဒေါင်ဒင်အင်းအလှ…ဒေါင်ဒင်အင်းမှငါးများသည် တခြားဒေသမှငါးများနှင့်မတူညီဘဲ လူသားနှင့်တူသည်ဟူ၍ဒေသခံများမှပြောကြားချက်အရသိရသည်။ ရှေးအခါတုန်းက ထိုဒေသကို ရဟန္တာ ၁ ပါး ဆွမ်းခံကြွရာမှ …